Soo dejisan Ventrilo 4.0.3 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Ventrilo
Ventrilo – software ah ee isgaarsiinta codka iyada oo internet ah. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan channels, wadahadalo record, channels sir iyo qabsato mugga of dhigteen. Ventrilo ku jira ka dhisay-in chat iyo u shaqeeyaan si loogu badalo text in fariin cod ah. Software waxaa ka mid ah tiro badan oo ah qalab reserved saamaynta dhawaaqa. Ventrilo sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad reserved hotkeys ee baahida user ka.
Tayada sare ee codka
Waxaa la dhisay-in chat
Programka sirta ah ee channels
Meeshay of codad
Soo dejisan Ventrilo
Faallo ku saabsan Ventrilo
Ventrilo Xirfadaha la xiriira